ekhaya / Bible / YeVangeli kaYohane / ch 1 John
1:1 Ekuqalekeni ube ekho uLizwi, waye uLizwi ekuye uThixo, uThixo waye uLizwi.
1:2 Yena wayekunye noThixo kwasekuqalekeni.
1:3 Zonke izinto zabakho ngaye, yaye akukho nto yenziwa yabakho ngaphandle Kwakhe.
1:4 Ubomi kuYe, kwaye obo bomi baba lukhanyiso eluntwini.
1:5 Ukhanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni, kwaye ubumnyama abaluqiqa.
1:6 Kwakukho umntu othunywe nguThixo, ogama uYohane.
1:7 Wafika kuba lingqina, ukuze anikele ubungqina ngalo ukhanyiso, ukuze bonke bakholwe ngaye.
1:8 Yena lowo ubengelulo ukhanyiso, kodwa wayeza kunikela ubungqina ngalo ukhanyiso.
1:9 I yena elukhanyiso oluyinyaniso, leyo likhanyisa wonke umntu, esiza kweli hlabathi.
1:10 Waye ehlabathini, yaye ihlabathi labakho ngaye, yaye ihlabathi àbamazi.
1:11 Waya yakhe, abakhe abazange kumamkela.
1:12 Kodwa nabani na wenza kumamkela, abo bakholwayo kwigama lakhe, wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo.
1:13 Aba bazalelwe, igazi, okanye ngakuthanda benyama, okanye ngakuthanda kwandoda, kodwa uThixo.
1:14 ULizwi waba yinyama, waza wahlala phakathi kwethu, sabubona ubuqaqawuli bakhe, uzuko njengelo, unyana okuphela kwamzeleyo uYise, ezele lubabalo nayinyaniso.
1:15 UYohane inikela ubungqina ngaye, yaye umemeza, bathi: "Lo ngulowo bendithetha ngaye xa bendisithi: 'Lowo uzayo emva kwam, ibekwe phambi kwam, ngenxa yokuba wabakho ngaphambi kwam. ' "
1:16 Kwaye ukuzala kwakhe, sonke siye safumana, nokuba nobabalo ngenxa yobabalo.
1:17 Ngokuba umthetho wawiswa nakuba uMose, kodwa ubabalo nenyaniso ngoYesu Krestu.
1:18 Akukho namnye wakha wambona uThixo; uNyana okuphela kwamzeleyo, lowo usesifubeni sikaYise, yena ngokwakhe uye wachaza ukuba.
1:19 Nabu ke ubungqina bukaYohane, oko amaJuda aseJerusalem athumela ababingeleli * nabaLevi kuye, okokuba kuye, ukuze ucele kuye, "Ungubani?"
1:20 Waza wavuma waza akazange aphike; noko ke wavuma ukuba: "Mna andinguye * uKrestu."
1:21 Iintlola ezi zambuza uYesu: "Ngoko ke oko? Ngaba unguEliya?"Wathi ke yena, "Hayi andinguye." "Ngaba unguye laa Mshumayeli?"Waphendula yena, "Hayi."
1:22 ngoko ke, Bathi kuye: "Ungubani, ukuze sibe nokubaphendula abo basithumileyo? Ngaba uthini na wena ngawe ngokwakho?"
1:23 Uthe, "Mna ndililizwi lodandulukayo entlango,, Lisithi, Yityenenezeni indlela yeNkosi,'Kanye njengoko watshoyo uIsaya umprofeti. "
1:24 Inxenye ke abo babethunyiwe phakathi kwabaFarisi.
1:25 Bambuza bathi kuye, "Yini na phofu, ukuba wena unguye uKristu,, hayi Eliya, hayi laa Mshumayeli?"
1:26 Waphendula uYohane kubo ngokuthi: "Mna ndinibhaptiza ngamanzi. Kodwa umi phakathi kwenu, obaziyo wena awazi.
1:27 Nguye lowo uzayo emva kwam, ngubani ibekwe phambi kwam, imitya nomtya weembadada kodwa mna andifanele athambise. "
1:28 Ezi zinto zenzeka eBhetabhara, phesheya kweYordan, apho uYohane wayebhaptiza.
1:29 Ngosuku olulandelayo, UYohane umbona uYesu esiza kuye, ngoko wathi: "Khangela, iMvana kaThixo. Khangela, yena ethwala isuse isono sehlabathi.
1:30 Nguye lo bendixela yena xa bendisithi, 'Emva kwam kufika umntu, ngubani ibekwe phambi kwam, ngenxa yokuba wabakho ngaphambi kwam. '
1:31 Kwaye ndandingazi ukuba. Kodwa kungenxa yesi sizathu ukuba mna, ndibhaptiza ngamanzi: ukuze abonakaliswe kwaSirayeli. "
1:32 Ke kaloku uYohane wanikela ubungqina, bathi: "Kuba Ndibone uMoya esihla evela ezulwini njengehobe; waza wahlala phezu kwakhe.
1:33 Kwaye ndandingazi ukuba. Kodwa lowo wandithumayo ukuba ndibhaptize ngamanzi, nguye owathi kum: 'Lowo phezu abo uya ùbone uMoya esihla ahlale phezu kwakhe, lo nguye obhaptiza ngoMoya oyiNgcwele. '
1:34 Ndaza ndabona, ndingqinile: ukuba lo nguye uNyana kaThixo. "
1:35 Ngosuku olulandelayo kwakhona, Ubuye wema uYohane nababini kubafundi bakhe.
1:36 Kwaye yakubona uYesu ehamba, uthe, "Khangela, iMvana kaThixo. "
1:37 Baye ke abafundi ababini babephulaphule kuye ethetha. Baza bamlandela uYesu.
1:38 ke uYesu, siguquke kwaye ababone belandela, wathi kubo, "Ngaba nifuna ntoni na?"Yaye bathi kuye, "Rabi (elo elithetha translation, Mfundisi), Uhlalaphi?"
1:39 Wathi kubo, "Yizani, nibone." Bahamba ke baya, bayibona indawo awayehlala kuyo, baza bahlala naye loo mini. Ke kaloku, kwakumalunga nelixa leshumi.
1:40 kanye noAndreya, umntakwabo Simon Petros, omnye wabo babini, babeve ngaye ngoYohane, baza bamlandela.
1:41 Ekuqaleni, wabona umntakwabo uSimon, wathi yena kuye, "Simfumene uMesiya," (eliguqulelwa njengokuba uKristu).
1:42 Wamsa kuYesu. ke uYesu, beqwalasele kuye, wathi: "Wena unguSimon, unyana kaYona. Ukubizwa kwakho kuya kuthiwa nguKefas," (eliguqulelwa ngokuthi Petros).
1:43 Ngosuku olulandelayo, wayefuna ukuya eGalili, waza wadibana noFilipu. Wathi kuye uYesu, "Ndilandele."
1:44 Ke kaloku uFilipu wayengowaseBhetesayida, idolophu yakuloAndreya noPetros.
1:45 UFilipu ufumana uNataniyeli, wathi yena kuye, "Simfumene lo bendixela yena uMoses wabhala ngaye emthethweni nabaProfeti: uJesu, unyana kaYosefu, waseNazarete. "
1:46 Wathi uNataniyeli kuye, "Kungákho nto ilungileyo kuba evela eNazarete?"Wathi kuye uFilipu, "Yizani, nibone."
1:47 UYesu wambona uNataniyeli esiza kuye, ke yena athi ngaye, "Khangela, i umSirayeli ngokwenene akukho nkohliso kuye. "
1:48 UNataniyeli athi kuye, "Uvelaphi na uyandazi?"UYesu waphendula wathi kuye, "Phambi kokuba uFilipu akubize, xa uphantsi komkhiwane, Ndikubonile."
1:49 Waphendula yena uNataniyeli athi: "Rabi, wena unguye uNyana kaThixo. Wena unguye uKumkani kaSirayeli. "
1:50 UYesu waphendula wathi kuye: "Ùkholwa ngokuba ndithe kuwe ndikuboné uphantsi komkhiwane?, ukholelwa. izinto ezingaphezulu kwezo, uza kubona."
1:51 Wathi yena kuye, "Amen, amen, Ndithi kuwe, niya kulibona izulu livulekile, nezithunywa zikaThixo zinyuka zisihla phezu koNyana woMntu. "